» हातगोडा फुटेमा के गर्ने ? यी हुन् ५ उपाय
हातगोडा फुटेमा के गर्ने ? यी हुन् ५ उपाय
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार २०:४८
चिसो मौसममा धेरै मानिसको हातगोडा फुट्ने समस्या हुन्छ । चिसोको कारण छालामा सुख्खापन हुनु, छाला फुट्नु लगायतका कारणले जाडोमा हातगोडा फुट्ने गर्दछ । यस्ता समस्याले अनुहार तथा हातगोडाको सुन्दरतामा ह्रास त आउँछ नै साथै व्यक्तित्वमा पनि प्रभाव पार्दछ ।
जाडोमा हातगोडा फुट्दा त्यसबाट रगत बग्ने गर्दछ र दुखाई बढ्दछ । समयमै उपचार हुन नसके कहिल्यै निको नहुने गरी कुर्कुच्चा सधै कुरुप देखिन सक्छ । यस्ता समस्याबाट बच्न विभिन्न क्रिमका साथै घरेलु विधि पनि उपयोगी हुन्छ ।
राति सुत्नुभन्दा अगाडी तातोपानीमा हातगोडा राम्ररी डुबाउनुहोस् । सो तातोपानीमा ३ चम्चा चिनी राखेर धोएमा छालाका फोहोर सफा हुन्छ । त्यसपछि क्रिम लगाउँदा छाला नरम हुने र फुट्ने समस्या कम हुँदै जान्छ ।
२. मोस्चराइजर क्रिम
नुहाएपछि र राति सुत्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य हातगोडामा मोस्चराइजर क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि मोस्चराइजर क्रिम नभए तेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हातगोडा फुट्ने समस्याबाट बच्न जाडोमा दिनभरी जुत्ता लगाउनु समेत प्रभावकारी हुन्छ । तर सकेसम्म आरामदायी र हल्का हावा छिर्ने जुत्ता लगाउनु पर्दछ । तर लामो समयसम्म जुत्ता लगाइ राखेमा चिलाउने समस्या हुनसक्छ ।
हातगोडाको फुट्ने समस्या हटाउन साथै छाला नरम राख्न आधा कागती काटेर त्यस भागमा दल्नुहोस् । त्यसपछि नुन हालेर तातोपानीमा गोडा डुबाउनुहोस् । एक सातासम्म यहि प्रक्रिया दोहोराएमा हातगोडा फुट्ने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।
५. तेल वा चीनी
हातगोडा रुख्खापन हुने समस्या हटाउन फुटेर बाहिर निस्किएको भाग कैँचीले काटेर पनि हटाउन सकिन्छ । यस्तोमा धेरै पीडा भएमा तेलले मालिस गर्नुपर्छ । साथै एक चम्चा सूर्यमुखी तेलमा २ चम्चा चिनी हालेर विस्तारै गोडामा मसाज गर्दा गोडामा टाँसिएको धुलो सफा हुने र गोडाका समस्याहरु कम हुँदै जान्छ ।